​ ​ ​ EVisa indianina ho an'ireo mpitsidika sambo fitsangantsanganana
E-Visa Indiana ho an'ny mpandeha sambo fitsangantsanganana mankany India
Ny governemanta India dia mamela ny fidirana ao India amin'ny alàlan'ny rano sy ny rivotra. Ireo mpandeha Cruise Ship dia afaka mandeha any India. Izahay dia mandrakotra ny antsipiriany rehetra eto amin'ity torolàlana feno ho an'ny mpitsidika ny Cruise Ship ity. Izay rehetra tianao ho fantatra raha tonga any India amin'ny alàlan'ny Cruise Ship dia voarakotra eto.
Tonga any India amin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana
Fitsangatsanganana nataon'i sambo lakile Nahazo hatsaran-tarehy fa tsy misy zavatra hafa mety hanolo. Ny ranomasina na ny dia an-dranomasina dia tena mampiditra ny hevitr'ilay dia manan-danja kokoa noho ny toerana itodiana. Ny sambo fitsangantsanganana dia manome anao fotoana fialan-tsasatra rehefa mandeha, mankafy ny fampiasa ao an-tsambo, ary koa manana traikefa nahafinaritra mitsidika seranana samihafa eny an-dalana. Ny fahitana an'i India avy amin'ny sambo fitsangantsanganana dia hanome traikefa iray tsy manam-paharoa ho an'ny mpandeha ary ny India izay ho hitanao dia mety ho hafa noho ilay iray hitorianao teny an-tanety.
Afaka mandeha mora any India amin'ny sambo fitsangantsanganana ianao amin'ny alàlan'ny fangatahana Visa mankany India ho an'ireo mpandeha an-tsambo. Ny e-Visa mpizahatany indianina (eVisa India Online) dia mamela anao hiditra ao India. Misy karazana Visa mpizahatany karana telo (e-Visa India Online):
30 andro e-visa karana ho an'ny mpizahatany, izay mamela fidirana indroa ho an'ny mpandeha Cruise Ship
E-Visa karana 1 taona ho an'ny mpizahatany, mpandeha Cruise Ship dia afaka miditra imbetsaka. Raha mikasa ny hiditra India mandritra ny in-3 na mihoatra ianao dia tokony hangataka izany Mpizaha mpizaha tany Visa
E-Visa indiana 5 taona ho an'ny mpizahatany, izay mamela ny fidirana indroa ho an'ireo mpandeha Cruise Ship
Misy ihany ny fepetra takiana amin'ny India Visa Fangatahana sary India Visa ho an'ireo mpandeha amin'ny sambo fitsangantsanganana izay tokony ho fantatrao ary ho hitanao eto ambany daholo izy ireo. Raha vantany vao fantatrao ireo takiana rehetra ireo dia afaka mora foana ianao mangataka amin'ny e-Visa Indiana ho an'ny Cruise Ship amin'ny Internet tsy mila mitsidika ny masoivoho indiana eo an-toerana mba hahazoana ny e-visa karana.
Rahoviana no azonao atao ny mangataka Visa any India ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana?
Azonao atao ny mangataka Visa ho any India ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana raha mahafeno ny fepetra takian'ny governemanta India ianao. Voalohany, mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Visa Indiana amin'ny ankapobeny ianao ary ho olom-pirenen'ny firenena azo ekena amin'ny Visa Indiana. Avy eo dia mila mihaona ihany koa ianao amin'ny fepetra azo ekena manokana amin'ny e-Visa karana ho an'ireo mpandeha an-tsambo, izay indrindra indrindra Ny sambo fitsangantsanganana izay hitetezanao dia afaka miala fotsiny ary mijanona amin'ny seranan-tsambo sasany nahazo alalana. Ireo dia:
Mangalore vaovao (aka Mangalore)
Raha mbola fantatrao ny làlan'ny fitsangatsanganana an-tsambo ary hijanona ny sambo ary hiala amin'ireo seranam-piaramanidina nahazo alalana fotsiny dia azonao atao ny mangataka amin'ny e-Visa Indiana. Raha tsy izany dia mety tsy maintsy mangataka fangatahana Visa any India nentim-paharazana na taratasy ianao, izay ilainao ny mandefa antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny mailaka ary manao dinidinika alohan'ny hanomezana ny Visa, izany dia mety ho fotoana maharitra.
E-Visa iza no hangataka rehefa mangataka Visa any India ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana?
Mila mangataka ny Ilay e-Visa mpizahatany ho any India izay natao ho an'ireo mpandeha izay mitsidika an'i India amin'ny tanjon'ny fitsangatsanganana sy fialamboly.
Raha ilay sambo fitsangantsanganana ataonao dia mahomby fijanonana iray na fijanonana roa fotsiny any India dia tokony hangataka ny E-Visa mpizahatany 30 Andro, izay ahafahan'ny mpitsidika mijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty nidirana ao amin'ny firenena ary a Visa fidirana indroa, izay midika fa afaka miditra indroa ao amin'ny firenena ianao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny valin'ny Visa. Tokony ho fantatrao fa misy ny daty famaranana voalaza ao amin'ny e-visa mpizahatany 30 Andro fa io no daty alohan'ny hidiranao ao amin'ny firenena, fa tsy ilay andro alohan'ny hamoahanao ny firenena. Ny datin'ny fivoahana dia hofaritana amin'ny datin'ny fidiranao ao amin'ny firenena ary 30 andro aorian'ny daty voalaza.
Raha, etsy ankilany, ny sambo fitsangantsanganana izay ataonao fijanonana mihoatra ny roa any India dia tokony hangataka ny E-Visa mpizahatany 1 taona, izay manan-kery mandritra ny 365 andro manomboka amin'ny datin'ny famoahana ny e-Visa. Ary tsy toy ny Visa Andro Mpizahatany 30 Andro no hamaritan'ny Visa mpizahatany 1 taona ny datin'ny famoahana azy, fa tsy ny datin'ny fidiran'ny mpitsidika ao amin'ny firenena, noho izany dia manan-kery mandritra ny herintaona aorian'ny famoahana azy. Ankoatr'izay, ny Visa 1 mpizahatany dia a Visa fidirana misimisy, izay midika fa afaka miditra ao amin'ny firenena imbetsaka ianao ao anatin'ny vanim-potoana vanim-potoanan'ny Visa.
Fepetra takiana Visa any India ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana
Raha handeha ho any India amin'ny sambo fitsangantsanganana ianao ary maniry ny hangataka ny Visa any India dia tokony hihaona amin'ny takiana Visa any India ho an'ny mpandeha an-tsambo amin'ny alàlan'ny fandefasana antontan-taratasy sasany sy fizarana vaovao sasany. Ireto misy antontan-taratasy sy fampahalalana izay tsy maintsy zaranao:
Kopian'ny sarin-doko misy pasipaoro an'ny mpitsidika (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona izy io), adiresy mailaka miasa, Ary ny carte debit na carte de crédit ho an'ny fandoavana ny sarany fangatahana.
A tapakila miverina na mandroso ivelan'ny firenena, ary ny antsipiriany momba ny dia ao anatiny sy avy any India.
Talohan'ny taona 2020, ny mpandeha sambo fitsangantsanganana an-dranomasina, toy ny mpandeha hafa rehetra mankany India, dia notakiana ny hizara ny angon-drakitry ny biometrika azy amin'ny India rehefa hiditra ao India. Saingy satria ela loatra ny fizotran'ny mpandeha sambo fitsangantsanganana ary tsy ny tena nahomby indrindra dia natsahatra nandritra izany mandra-pahatongan'ny fomba mahomby kokoa no eritreretina ary tsy iray amin'ireo Fepetra Visa any India ho an'ny mpandeha an-tsambo.
Mariho fa na izany aza Business Visa mpihazona ary Visa fitsaboana Indiana Ireo mpihazona dia afaka manatona Indiana amin'ny alàlan'ny sambo Cruise, na dia tsy tranga mahazatra aza izany.
Raha mahafeno ny fepetra sy ny fepetra takiana amin'ny Visa any India ho an'ireo mpandeha an-tsambo ianao, ary mangataka farafahakeliny 4-7 andro mialoha ny fidiranao ao amin'ny firenena, dia tokony ho afaka mangataka mora foana amin'ny Visa Indiana ianao izay Taratasy fangatahana e-Visa Indiana dia tsotra sy mahitsy. Tsy tokony hahita olana ianao amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa any India amin'ny fitsangatsanganana an-tsambo. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk ho fanohanana sy fitarihana.